IMidlalo EYIMPILO - Bhala izindatshana bese uthola imali ngokubuka ngakunye.
Dala okuqukethwe okuhlukile
ipulatifomu futhi uthole imali!
Bhala izindatshana bese uthola imali ngokubuka ngakunye.
Imidlalo ye-U LIVE ngumdlalo kanye ne-esports platform lapho abasebenzisi bethula khona imifudlana, ukubukeza okuthunyelwe, izinkomba kanye nokuhamba ngezinyawo. Lapha abantu futhi babelana ngolwazi lwabo - amathiphu wokuthumela namakhodi ku-athikili nakumavidiyo.
Sifuna ababhali abanethalente abalungele ukudala okuqukethwe kwabo okuhlukile. Sikhokha ngokubuka ngakunye futhi sivumela ukuthumela imibhalo ekhokhelwayo. Izivakashi zikhokha kuze kufike ku- $ 0.04 ngokubuka ngakunye.
Sebenzisa amandla emidlalo ye-U LIVE ukuze uzuze kokuqukethwe kwegeyimu
Sivumela izindlela eziningi zokwenza imali: ungathumela izindatshana zamahhala bese uhola ngokubukwa noma wenze okuqukethwe kwakho kukhokhelwe ababukeli. Sebenzisa uhlelo lwethu lokuhambisana ukuze uthole imali engenayo.
Inkokhelo yokubuka okuthunyelwe
U-LIVE ukhokha ekubukeni ngakunye kwama-50 kokuqukethwe kwakho mahhala kwababukeli.
Umvuzo wokumema ababhali bamakhophi
Mema abanye ababhali kupulatifomu yethu futhi uthole 10% emholweni wabo.
Ukwenza imali ngombhalo
Dala okuqukethwe okukhethekile futhi ukwenze kube mahhala ngokubhaliselwe. Usufuna ukukhetha inani lokubhaliselwa kwanyanga zonke.
Ukwenza imali ngenjini yokusesha
Yiba ngumlingani wethu, mema abasebenzisi ku-U LIVE futhi uthole ama-30% ngokuthenga epulatifomu.
Sifisa ukuhlukahluka kokuqukethwe
Lapha sikhuthaza okuthunyelwe mayelana nemidlalo nama-esports - ukubuyekezwa komdlalo nehadiwe, izindlela zokuhamba, amathiphu wabadlali bemidlalo ye-gamers kanye nemidlalo yokuhlobisa.
Okuthunyelwe kwekhwalithi ephezulu kusiza ukuzuza okuningi
Ukubandakanya izithombe noma ama-vids kanye nencazelo ethandekayo yokuthunyelwe kwakho ukuheha ababukeli abaningi futhi ukhuphule iholo lakho.
Bheka nathi futhi uthole namuhla!